Imali ekhokhwayo – Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds
/ Imali ekhokhwayo
Zintathu izikwama amalungu angakhetha kuzona, yilezi:
Amafomu okufaka imali (Returns Submission)
I-Pension Funds Act ngokwemigomo yeSigaba 13A (2) (a), ichaza ngezinto okufanelwe zifakwe wumqashi kwifomu aliletha esikhwameni nyangazonke.
Lamafomu (returns) abalulekile njengoba iSikhwama sidinga ukutshelwa ukuthi yimalini okufanele inikezwe ilungu ngalinye. Lamafomu aphinde aluleke iSikhwama ngoshintsho kumarekhodi amalungu, isibonelo: amalungu amasha, amalungu ashiyayo esikhwameni, ushintsho emiholweni yamalungu, njalonjalo.
Amafomu (returns) anyangazonke kufanele abuyiselwe eSikhwameni nge-email abeku-MS Excel, zingakapheli izinsuku ezili 15 iphelile inyanga uma kukade kukhokhiwe.
Amafomu (returns) kufanele athunyelwe nge-email ku info@njmpf.co.za.
Click here ukuze ubone ukuthi yimiphi imininingwane oludingeka kulefomu nyangazonke.
Ukukhokhwa kwemali: ISigaba 13A
Ngokwemigomo ka-Section 13A(1), umqashi kudingeka ukuba akhokhe imali esikhwameni zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa emva kokuphela kwenyanga uma leyo mali kufanele ikhokhwe. Le mali kufanele ifakwe kwi-akhawunti yasebhange yesikhwama kanti kufanele ivele kwi-akhawunti ngosuku lwesikhombisa.
Uma kwenzeka umqashi ehluleka ukukhokha le mali esikhathini esibekiwe, inhlawulo yokukhokha sekudlule isikhathi iyofakwa kumqashi ngokwemigomo ye-Pension Funds Act kusetshenziswa inhlawulo ebekiwe.
Uma le mali ingakhokhwa, izindlela ezahlukahlukene, njengoba kubekiwe, ziyosetshenziswa ukubuyisa izimali kuMqashi, uma kuhluleka lapho, uMasipala uyobika kuMalunga awo, iMenenja kaMasipala kanye neMeya, bese kuvulwa icala emaphoyiseni (SAPS).
Kubalulekile kuMqashi ukubheka ukuthi isisebenzi siyilunga leSikhwama yini njengoba lokhu kushintsha kwe-LA kungukushintsha kwe-LA nje kuphela kwilunga okungenzeka kwilunga elisha. Isikhwama siyoshintsha imihlomulo yelunga siyishintshele kwi-LA entsha, kukhokhwa imali efanayo eSikhwameni esifanayo.
Kumalunga amasha, lolu lwazi kuyofanele luhanjiswe esikhwameni uma nje ilunga lijoyina isikhwama:
Ifomu yokujoyina kwelunga
Ifomu yokukhetha yeSikhwama
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi wonke amafomu kudingeka agcwaliswe ngokuphelele futhi asayinwe.
Amalunga amasha kudingeka agcwalise i-medical certificate kudokotela okhethwe yiSikhwama. Eminye imininingwane ingatholakala ngokuxhumana ne-Client Services.
Okuyizidingo ngokomthetho (Section 13A)